आज मिति२०७८ साल बैशाख २२ गते बुधबारको राशिफल हे'र्नुहोस् -
[ May 12, 2021 ] सामाजिक संजालमा ‘महाभारत’का ‘भीष्म पितामाह’को मु’त्युको हल्ला फैलिएपछि… समाचार
[ May 12, 2021 ] घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ? समाचार
[ May 12, 2021 ] क्षेत्रीको छोरा र राईकी छोरीबीच धुमधाम बिबाह, बेहुला भन्छन्, ५ दिनमै प’ट्याएको (भिडियो हेर्नुहोस्) समाचार
Homeराशिफलआज मिति२०७८ साल बैशाख २२ गते बुधबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
आज मिति२०७८ साल बैशाख २२ गते बुधबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
May 5, 2021 admin राशिफल 194
बाणिमा म’धुरता छाउनेछ । नयाँ कामको थाल’निले मन प्रशन्न रहनेछ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । नयाँ लगानिका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । रचाना’त्मक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । आय आ’र्जनको लागी राम्रो समय रहेको छ । हरकोहिको पुर्ण बिश्वास नगर्नु होला धो’का हुन सक्छ ।
सामा’जिक कार्य’मा अग्रसर रहनाले मान स’म्मान प्राप्तीको योग बन्नेछ । सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । सबारी साधनको प्र’योमा सजग रहनु होला । गरीरहेको कार्य क्षणिक रुपमा परीर्वतन गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । शुभ चिन्तकहरुको साथसहयोग द्वारा अधुराकार्यहरु सम्पा’दित हुनेछन ।
सामा’न्य कार्य सम्पादनमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । आय आम्दानिमा बिशिष्ठ ब्यत्तिहरुको सहयो’ग प्राप्त रहनाले उत्तम रहनेछ । तपाईको आलोचना गर्ने ब्यत्तिहरु बढ्नेछन । मित्रजनहरुको साथसहयोगमा नयाँ कार्यको प्रारम्भ गर्न उत्तम समय रहेकोछ । अरुको पुर्ण बिश्वासमा गरीएका कार्यले अ’पजस दिलाउनेछ ।
बिश्वासिला ब्यत्ति’हरुबाट धोका हुनाले मानसिक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य तना’बको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । शुभचिन्त’कहरुको माध्यम बाट आम्दानिका श्रोत हरु सबल तुल्याउन सकिने समय रहेकोछ । बाणीका कारण सामान्य वादबिवादको झमे’लामा फसिएला ।
आर्य आर्जनका निम्ती सामान्य यात्रा निम्त्याउने समय रहेकोछ । पारीवारिक मनोरञ्ज’नका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ लगानि गर्न उत्तम समय रहेकोछ । समयमा गरीएको सहि निर्णय उत्तम साबित हुनेछन । जिवन साथिको साथ सहयोगमा ब्यपार ब्यवसा’यमा मनग्य लाभ प्राप्त हुने समय रहेकोछ ।
प्रतिश्प’र्दा जन्य कार्यमा बिशेष सजग रहनुहोला । पारीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । सा’मान्य आर्थीक संकटको सामना गर्नु पर्ला । मनोर’ञ्जनका निम्ती सामान्य यात्राको योग बन्नेछ । मानसिक चन्चलताका कारण नजिकका मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्प’न्न हुन सक्नेछ ।
आय आम्दा’निमा बिशिष्ठ ब्यत्तिहरुको सहयोग प्राप्त रहनाले उत्तम रहनेछ । पठन पाठनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । कलाकौ’शलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आफुभन्दा सानाको स्वास्थमा देखिएको सम’स्या जटिल बन्नाले सामान्य तनाब आई पर्नेछ ।
तपाई द्वारा सम्पादि’तकार्य चर्चा योग्य साबित रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सरिक हुने तथा मान स’म्मान प्राप्तीको सम्भाबना रहेकोछ । सामा’जिक कार्यमा अग्रसर रहने उत्तम समय रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसाय मध्यम रहने दिन रहेकोछ । सवारी साधनको प्रयोगमा बिषेश साबधान रहनु पर्ने सम’य रहेकोछ ।
कार्यसम्पा’दनको उत्तम श्रेय तपाईलाई प्राप्त रहनाले मन हर्शित रहनेछ । तपाईको आलोचना गर्ने ब्यत्ति’हरुको कमि नरहला । प्रिय मित्रजन सगँको भेटघाटले मन हर्षित रहने योग रहेकोछ । भोजभतेर जन्य कार्यमा सरीक हुने योग रहेकोछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा अधुरा’कार्यहरु सम्पादित हुने योग रहेकोछ ।
स्थीर क्षेत्र’मा गरीएको लगानि दिर्घकालिन आम्दानिको श्रोत बन्नेछ । कला तथा साहित्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा मन हर्षित रहनेछ । खानपानमा भने सजग रहनु होला । प्रिय मित्रजन’हरुसगँको भेटघाटले मनमा प्रशन्नता दिलाउनेछ । बाणी’का कारण सामान्य वाद विवादको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ ।
प्रभाबशालि ब्यत्ति’त्वको बिकास हुनेछ । कार्य सम्पादनमा आटँ र शाहसको बृद्यि हुने समय रहेकोछ । मित्रजन’हरुको साथ सहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । नयाँ लगानि गर्न उत्तम समय रहेकोछ । जिवन साथीको साथ सहयोमा नयाँकार्यको थालनि हुने समय रहेकोछ । कार्यसम्पादनमा आएको असहज परीस्थी’तिहरु सुधार उन्मुख रहनेछन ।
गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वा’समा कार्य नसुम्पीनु उत्तम रहनेछ । तपाईको आलो’चना गर्ने ब्यत्तिहरुको कमि नरहला । पारीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहनाले मन प्रशन्न रहला । तात्का’लिक खर्चको कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सम्भाब’ना रहेकोछ ।
बिबाहको मण्डपमै यस्तो गरे बेहुला बेहुलीले आशिर्वाद दिन आएका सबै हेरेको हेरै भए (हे’र्नुहोस् भिडियो)
आज असोज ३ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
September 19, 2020 admin राशिफल 2651
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) न्यालय’बाट हुने व्यायिक निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा फैसला हुनाले खुसीले उचाई नाघ्नेछ । पढाइ लेखाइमा नसोचेको सफ’लता हात लाग्नेछ । व्यापारमा बृद्धि हुनेछ भने थप ठाउमा लगानी गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा माव’ली पक्षबाट भने’जस्तो
August 27, 2020 admin राशिफल 3704
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सवारी सा’धनको प्रयोग गर्दा वा चलाउँदा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिन्न । दिनभर व्यास्त भएपनि न्यून पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउँनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । खानपिन तथा बाहिरि बाता’बरणको ख्या’ल गर्नुहोला ।
September 30, 2020 admin राशिफल 3913
सामाजिक संजालमा ‘महाभारत’का ‘भीष्म पितामाह’को मु’त्युको हल्ला फैलिएपछि…
क्षेत्रीको छोरा र राईकी छोरीबीच धुमधाम बिबाह, बेहुला भन्छन्, ५ दिनमै प’ट्याएको (भिडियो हेर्नुहोस्)
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (173009)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (166864)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (166493)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (166301)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (165339)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (163969)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (163502)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (161975)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (156701)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145510)